अभिनय नै गर्ने गरि हरिहरको फिल्मको घोषणा कहिले होला ? - Khabar Nepali
होमपेज / मनोरञ्जन / अभिनय नै गर्ने गरि हरिहरको फिल्मको घोषणा कहिले होला ?
अभिनय नै गर्ने गरि हरिहरको फिल्मको घोषणा कहिले होला ?
चलचित्र ‘शुभ लभ’मा काम गर्दै यूवा ज्योतिष हरिहर अधिकारीले रंगिन पर्दाको करिअर सुरुवात गरे । यो चलचित्र बक्स अफिसमा नराम्रोसँग चिप्लियो । चलचित्र नचलेपछि हरिहरको उदाउन लागेको करिअरमा ठेस लाग्यो । तर, पनि हरिहरलाई चलचित्रको नशाले भने छोडेको थिएन ।
चैत्र ६ बाट ‘दि भ्वाइस अफ नेपाल ३’
अभिनेता रणवीर कपुरलाई कोरोना संक्रमण
फिल्म सुरु भएपछि भिडियो खेल्दिनँः राजेश हमाल
जोडी बाँध्दै विनय र नम्रता
प्रियंका चोपडाले न्युयोर्कमा शुरू गरिन् रेस्टुरेन्ट